Kooxda Heegan oo Galabta guul ka gaartay Mogadishu City Club kulan la bixiyey labo kaar oo casaan ah … + SAWIRRO – Gool FM
Kooxda Heegan oo Galabta guul ka gaartay Mogadishu City Club kulan la bixiyey labo kaar oo casaan ah … + SAWIRRO
Haaruun June 6, 2021
(Muqdisho) 06 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Heegan ayaa saldhigatay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Somali Premier League kaddib markii ay galabta guul ka gaareen naadiga Mogadishu City Club.
Kulankan oo ku bilowday dardar ay wadeen wiilasha Heegan ayaa daqiiqaddii 2-aad ee bilowgii ciyaartaba gool looga naxsaday MCC, waxaana goolkaas oo ahaa baas qiyaano ku dhisan dhaliyey xiddiga lambarka 9-aad ee C/qaadir Eenoow, kaddib caawin uu ka helay Henry Kamara, kulankan ayaana sidaas ku noqday 1-0 ay ku gacan sarreysay Kooxda Heegan.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa ku dhammaaday 1-0 looga gacan sarreeyey Mogadishu City Club, inkastoo labada kooxood ay min hal kaar oo kuwa digniinta ah qaateen, dhanka MCC waxaa 24-daqiiqo ka qaatay Feysal Xasan Xaashi, halka Heegan uu ka qaatay 29-daqiiqo Cabdicasiis Safimaayo.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Kooxda Mogadishu City Club ayaa ku guuldarreysatay inay goolkaas iska soo guddo, waxaana kaarka digniinta ah ka qaatay 75-daqiiqo xiddiga lambarka 6-aad ee Cali Cumar.
Heegan waxaa iyana xusid mudan in goolhayahooda Hanad Cumar uu kaarka digniinta ah guddoomay daqiiqaddii 89-aad.
Kooxda Mogadishu City Club oo gool lagu hoggaaminayey ayaa xaalku ku sii xumaaday markii 93-daqiiqo kaarka casaanka ah oo toos ah uu ka qaatay xiddigooda daafaca ee Axmed Cabdullaahi Baanu, kaddib markii meel ku dhow xerada ganaaxa ee kooxdiisa uu ku jilaafay dhaliyaha goolka ee C/qaadir Eenow.
Kulanka ayaana wakhtigii loogu talo galay ku soo dhammaaday 1-0 looga adkaaday hoggaamiyeyaasha horyaalka Somali Premier League ee Mogadishu City Club, waxaana guushaan ay uga dhigan tahay Heegan inay kaalinta labaad soo saldhigteen.
MCC ayaa haatan hoggaanka horyaalka Somali Premier League ku haysa 29-dhibcood kaddib 13-kulan oo ay ciyaartay, waxaana Heegan ay soo degtay kaalinta labaad iyadoo leh 24-dhibcood.
Dhanka kale markii uu kulanku soo dhammaaday waxaa isna kaarka casaanka ah oo toos ah loo taagay Tababaraha kooxda Mogadishu City Club ee Maxamed Lamjad, kaasoo la murmay garsoorka, isagoo ka cabanayey qaladaad laga galay.
Kulankan waxa uu ka dhacay garoonka Tuulada ciyaaraha dalka ee Stadium Mogadishu, waxaana dhex-dhexaadiye ka ahaa garsooraha da’da yar ee Cumar Cartan.
Fabrizio Romano oo shaaciyey kooxda uu go'aansaday inuu ku biiro Georginio Wijnaldum... (Ma Barcelona mise PSG?)